Ngathi-i-Hebei Weaver Textile Co., Ltd.
I-HEBEI YOKUQALA I-CO., LTD.
Amava eeMveliso zeMinyaka engama-24
Ipholiyesta yokuthunga umsonto
Umsonto wokuSula oSisiseko
Ukuzibophelela ekuqhubeni iimpahla kunye nakwintengiso.
Nokuba iyathengiswa ngaphambili okanye emva kwentengiso, siya kukubonelela ngeyona nkonzo ibalaseleyo ukukwazisa kwaye usebenzise iimveliso zethu ngokukhawuleza.
Yasekwa ukusukela ngo-1996. Iimveliso zethu eziphambili iintlobo ezahlukeneyo iminqwazi kunye yarns.With nokwandiswa ishishini, siye saseka 3 umnqwazi mveliso kunye 3 mveliso vulu.
Inkampani isebenzisa iinkqubo zoyilo eziphambili kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yolawulo lomgangatho we-ISO9002 2000 yolawulo lomgangatho.
Ngoku oomatshini bethu bonke bakwinqanaba eliphezulu lokuhamba, ngokusebenzisa iindlela ezininzi zentsebenziswano, iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphandle nakwimimandla enje nge: United States, Canada, Spain, Turkey, United Kingdom, Netherlands, Finland, Australia, South I-Afrika, uMzantsi Korea, i-United Arab Emirates, iVietnam, iBrazil, iMalaysia, i-India, iThailand, iMorocco, iBangladesh, iGuatemala, iTopiya. Ngoku iifektri zethu ziseke ubudlelwane obuhle bexesha elide kunye nabarhwebi bamanye amazwe.
Sisoloko sinamathela "kumthengi ngowokuqala, umgangatho wokuqala". Siya kubambelela kwimarike esekwe, senze ukusebenza kakuhle koqoqosho njengeziko, kwaye sihlengahlengisa isicwangciso seshishini, uphando kunye nokuphuhlisa iimveliso ezintsha.
Siphuhlise iintlobo ngeentlobo zeemveliso eziye zadlula kwimigangatho yolawulo lomgangatho we-ISO9002 2000.
Siyinkampani ezinikele ekusekeni ubuhlakani bexesha elide kunye nabathengi behlabathi.
Injongo yethu kukuba ngowona mthombo uphambili weminqwazi eyahlukeneyo yelaphu, imisonto yokuthunga ipholiyesta, imisonto yokuthunga engundoqo kunye neminqwazi yeloli.
Siphumeze imigangatho yolawulo lomgangatho olungqongqo ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu eMntla Melika naseYurophu banokufumana iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwimarike yehlabathi etshintsha ngokukhawuleza.
Sijonge ukusebenza nabahlobo bamashishini basekhaya nabangaphandle kwaye senze ikamva eliqaqambileyo!
Njengenkampani enamava engama-24, siya kusebenza nzima ukubonelela uluhlu olupheleleyo lwezisombululo zelaphu.
No. 98 Huanghe Avenue, District High-zobugcisa, Shijiazhuang City, Hebei kwiPhondo, China